Malunga nathi -Daxin oomatshini Co., Ltd.
Qingdao Daxin Oomatshini Co., Ltd.
Qingdao Daxin Oomatshini Co., Ltd.lishishini lobungcali elivelisa izixhobo zomsebenzi womoya. Inkampani ibandakanyeka ikakhulu kuyilo, uphuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa kwezixhobo zomsebenzi womoya. Daxin Machinery ithatha uxanduva lokubonelela ezikumgangatho ophezulu, ixabiso eliphantsi izixhobo zokusebenza yokusebenza eziphakamileyo kuninzi lwabasebenzisi, rhoqo ukuphucula iimveliso ezikhoyo, kwaye rhoqo ngokusungula uthotho iimveliso ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi ezahlukeneyo. Iimveliso zayo zineempawu zezixhobo zenoveli, ukuphakamisa okuzinzileyo kunye nokusebenza okukhuselekileyo. Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kuhlolo oluphezulu, ukufakwa kunye nokugcinwa kwamashishini kunye nezemigodi, oololiwe, oohola bendlela, izikhululo zeenqwelo moya, iinqanawa, amandla ombane kunye namanye amashishini; Ukuphathwa kwemithwalo, ukuthuthwa, kunye nokufumba koovimba, kwizibuko, nakwimigca yemveliso; amabala emidlalo, amagumbi okuhlangana kunye nezinye izakhiwo eziphakamileyo Iindawo ezingaziwayo, umhombiso, ulondolozo kunye nomsebenzi wokucoca, njl., zinokuphucula ukusebenza kwayo kakuhle.
Le nkampani iye enkulu-isikali ukusika, ukugoba, ukuwelda, ukutshiza kunye nezinye izixhobo zobungcali, kwakunye neqela leenjineli zobungcali zobungcali kunye nabasebenzi beenkonzo zasemva kokuthengisa. Inkampani inombutho ovakalayo, amandla ezobuchwephesha kunye nokusebenza kwabasebenzi, umbutho wokuvelisa osebenzayo, kunye nenkxaso ethembekileyo yamalungiselelo. Idibanisa imveliso, ukuthengisa kunye neenkonzo zokuqeshisa ukubonelela abathengi abahlukeneyo ngesixhobo esifanelekileyo kunye neenkonzo.
Qingdao Daxin Oomatshini ibambelela kwifilosofi yeshishini "yokujolisa ebantwini, ukusebenza okusemgangathweni, ubuvulindlela kunye nokwenza izinto ngendlela eyiyo", ukulandela umoya weshishini "wokufuna izinto ezintsha, ukufuna inyani, ukunyaniseka, kunye nokugqwesa", kusebenza ngokukuko ukusebenza kweqela kunye nesicwangciso seshishini samanye amazwe, kwaye isebenzela izixhobo zasemoyeni Uphuhliso lobuchwephesha kwinkampani lube neziphumo ezihle. Ukuthembela kwizibonelelo zetekhnoloji, izinto eziluncedo ezintsha kunye nebrand brand, ukuqaqamba kwenkampani ngokubanzi kunye nokukwazi ukubanzi kuphuculwe ngokukhawuleza, ngenjongo yokuba ngumenzi wokuqala wasekhaya kunye nomenzi owaziwayo kwilizwe liphela wezixhobo zomsebenzi womoya.
Imveliso ephambili: Isikere lift, ilifti yokunyusa imithwalo, iqonga lealuminium yomsebenzi, isitulo esinamavili, ukuphakamisa boom, ukuphakama kwelori yomsebenzi wenqwelo-mafutha, i-orderpicker, istacker, i-dock ramp njl.